रोचक / विचित्र – Page 69 – Medianp
यो ५ कारण विवाहित महिलाले परपुरुषसँग शारिरिक सम्बन्ध राख्दछन् ,के के हुन् त कारण ?(जान्नुहोस)
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक १८, २०७५११:२४0
काठमाडौ । विवाह भनेको दुई ब्यक्तिहरुको सम्बन्धलाइ एकै ठाउमा वा एकअर्कामा जोडने माध्यम हो । यसमा दुबै पक्ष नै अति सबल हुन्छ । एउटालाई पर्दा अर्काले साथ दिन्छन् त्यसैले यस सम्बन्धलाइ एउटै रथको दुइ पाग्रा
जब किसान आफैंले बनाए विमान…
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक १७, २०७५१०:२०0
काठमाडौंः चीनमा लसुनको खेती गर्ने झु यूईको विमान उडाउने सपना थियो । तर उनको यो सपना पुरा हुन नसकेपछि आफै विमान बनाउने फैसला गरे । उनले एयरबस ए–३२० को ढाँचा बनाउने कामलाइ लगभग पुरा गरिसकेका छन्
१० वर्षको उमेरमा धार्मिक प्रशिक्षण लिइरहेकी युवती एकै चोटी बनिन् पोर्न स्टार !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक १६, २०७५१७:४१0
एजेन्सी । १० वर्षको उमेरदेखि धार्मिक प्रशिक्षण लिइरहेकी एक युवती एकाएक पोर्न स्टार बनेकी छन् । कोलम्बीयामा इसाइ साध्वी बनेर बस्न चाहने युवती एका एक परिवर्तन भएपछि उनी पोर्न स्टार बनेकी हुन् । २८ वर्षिय
छोरी हेर्दै ड्यूटी गरिरहेकी भारतीय महिला प्रहरीको तस्वीर भाइरल
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक १६, २०७५१७:१०0
एजेन्सी,१६ कात्तिक । प्रहरी हवल्दारको रुपमा काम गर्दै आएकी भारतीय महिला प्रहरीको छोरी हेर्दै काम गरिरहेको तस्वीर भाइरल भएको छ । भारतको झाँसीमा बस्दै आएकी अर्चनाले आफ्नो सरुवाको माग गर्दा समेत पाएकी थिइनन् । अर्चनाको यो
९६ बर्षीया वृद्धा स्कुल नै नगई प्रथम भइन् , जसले परीक्षामा १०० मा ९८अंक प्राप्त गरिन्
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक १६, २०७५१६:१६0
काठमाडौ । भारतको केरलामा ९६ बर्षीय वृद्धाले स्कुल नै नगई परीक्षामा १०० अकंमा ९८ ल्याएर प्रथम बनेकी छिन् । उनको नाम कार्तियानी अम्मा हो । उनले केरला राज्य साक्षरता मिसनको अक्षरालाक्षम साक्षरता कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै अंक
समुन्द्र भित्र हजारौको संख्यामा यस्तो अचम्मको जीव देखियो ! जसले वैज्ञानिकलाइ समेत अचम्मित बनायो (हेर्नुहोस यो भिडियो )
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक १६, २०७५१५:५४0
काठमाडौ । क्यालिफोर्नियाको एक समुन्द्रमा एउटा अनौठो प्रकारको जीवको समूह फेला परेसगै वैज्ञानिकहरु नै छक्क परेका छन् । उनीहरुले त्यहा अनुसन्धान गरिरहेको बेलामा एक हजार भन्दा पनि धेरै अण्डा पार्दै गरेका अक्टोपसहरु समुद्रमा फेला परेकाले वैज्ञानिकलाइ
८३ दिन सम्म उपचार गर्दा पनि भयानक तरिकाले भयो मृत्यु
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक १६, २०७५१४:१३0
एजेन्सी,१६ कात्तिक । सन् १९९९ मा तोकाइमुरामा भएको न्यूक्लियर दुर्घटनाले अझै पनि त्यहाँका मानिसहरुलाई झस्काउने गरेको छ । एउटा यस्तो भयानक दुर्घटना जहाँ अटमिक फ्यूल बनाउनको लागि भएको सानो गल्तीको कारण नाइट्रिक एसिडमा धेरै मात्र
भिखारी सम्झेर बाइक शोरुमबाट बाहिर निकाल्न खोजेको वृद्धले पारे छक्क ,यस्तो थियो रहस्य
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १५, २०७५१८:०६0
काठमाडौ । थाइल्याण्डमा बाइक किन्न आएको एक वृदलाइ भिखारी सम्झेर शोरुमबाट बाहिर निकाल्न लागेको फोटो अहिले निकै भाइरल भएको छ । यो एउटा अनौठो घटना घटेको छ । थाइल्याण्डको थोमस अलेक्स्थित एक मोटरसाइकल शोरुममा एउटा ब्यक्ति
किन राख्छन् मानिसहरु जनावरसँग शारिरक सम्बन्ध ? यस्तो छ कारण
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १५, २०७५१४:२५0
एजेन्सी । मानिसहरुले जनावरसँग शारिरक सम्बन्ध किन राख्छन् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । पशु करणी गरेका घटनाहरु बेलाबेलामा सुन्दै आएका छौँ । यसको कारण खोज्ने क्रममा थुप्रै विवादहरु पनि आउँने गर्छन् ।
प्रेममा धोका दिएको भन्दै प्रेमीले गरे यस्तो हर्कत ! प्रेमीकाकोे ओठ टोकेरै चुडाइदिए !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक १५, २०७५१३:५५0
एजेन्सी । एकतर्फी प्रेममा पागल भएका एक युवाले प्रेमीकाले धोका दिएको भन्दै आठ टोकेर चुडाइदिएका छन् । यो घटना दक्षिण अमेरिकाको क्यारोलिना भन्ने ठाउँको हो ।उनले पूर्व प्रेमीका कायला हेसले ओठ टोकेर छुट्याइदिएका हुन् ।
Previous 1 … 68 69 70 … 202 Next